Downloads 17 457
Mpanoratra: Chris Coarse, Ryan Alan, Middleton Garry, Dickenso
Lockheed C-130 Hercules "Simshed." Arguably ny tena nahomby ny lahatsoratra-ady miaramila fiaramanidina fitaterana, ny Lockheed C-130 Hercules dia vokatry ny famaritana navoakan'ny ny USAir Force in 1951. Ny voalohany ny roa prototypes antsoina hoe YC-130, Powered by efatra Allison T56 turbine Mpanosika-A-1, 3,250 HP, nanao ny sidina voalohany tamin'ny 23 Aogositra 1954.
Fivelaran'ny elany: 40.41 M
Elatra Area: 162.12 m²
Foana lanja: 34'686 kilao
Maximum payload: 22'597 kilao
Max. : 79'380 kilao
Ara-toekarena ny hafainganam-pandeha: 556 km / h
Range: 3,600 km miaraka 18'144 Kg payload
Crew: 4 + 92 tafika na 64 paratroopers
Roa tsara tarehy sy ho tsara repaints tafiditra tontonana. Feo no tonga lafatra. Mba hanokatra ny varavarana; Fanovana + E. Mba manomboka ny maotera: Ctrl + E
Lockheed kintana (Alphasim) FS2004